“मलाइ मर्ने न बाच्ने बनाउछन अब पत्रकारहरुले ” – रबि लामिछाने
- नेपाली सन्देश शनिबार, असार २३, २०७५ , 10.2K जनाले हेर्नुभयो
अब मलाई खेद्नु सम्म खेदिन्छ, मेरो सात पुस्ते निकालिन्छ र केहि कर्याकर्ता प्लस पत्रकार मित्रहरूले नै मर्नु न बाच्नु जस्तो गराउनु हुन्छ। मलाई यो राम्ररी थाहा छ। तर आलोचना सङ डराएर सत्य र मनको आवाज बोल्न छोडे भने मलाई महा पाप लाग्छ।आचारसंहिता उल्लंघन मा मुद्दा माथी मुद्दा
खेपिरहेका,कयौं पटक सजाय समेत सुनाईएका मान्छे कसरी प्रेस काउन्सिलको कार्यबाहक अध्यक्ष हुन योग्य हुन्छन् ? तर फोकटमा चीन जान पाइन्छ भन्दैमा आचारसंहिता उल्लंघनका बादशाहलाई कति बोक्नु भएको तपाईहरुले ? राज्यको कुनै पनि नियम मैले नमानेको भए मैले एक मिनेटमा सजाय पाउनु पर्छ। मलाई अरुलाई भन्दा कडा गरियोस। मैले गल्ती गरेको रहेछु भने नियम बनाएरै भएपनि, संसोधन गरेरै भए पनि कारवाही गरियोस्। तर प्रेस काउन्सिलले मेरो
immigration status खोज्ने हो ? प्रेस काउन्सिलले सोधपुछ गर्यो मैले जवाफ दिए। सक्कियो। उसो भएअब मेरो बैंक डिटेल, मेरो helth stutas पनि प्रेस काउन्सिलले माग्ने ?
बिदेश बसेका नेपालीलाई डिपोर्ट गर्ने बिज्ञप्ति निकाल्ने ? साईबर क्राइमका सिरियस भन्दा सिरियस मुद्दा पेन्डिङमा राखेर रातारात आफुलाई गाली गर्नेलाई आफै दौडेर थुनाउने ? यो पावरको मिस्युज हो।आफ्नो आलोचनाको प्रतिरक्षा गर्न संस्थाको प्रयोग गर्ने ? म बाट जान अन्जानमा कयौ गलती भएका होलान् । जसका लागि मैले सजाय पाउनै पर्छ।
दर्शकहरुले दिएको माया र बिश्वासमा गर्व मात्र गरेको छु,घमण्ड कहिलेपनि गरेको छैन। मायाले मात्त्तिने र घृणाले आत्तिने phase र age दुबैमा म छैन, ढुक्क हुनुस। अहोरात्र खटेर पाएको थोरै लोकप्रियताले कसै कसैको पेट हुडलेको मात्र हो। Nothing Else… सत्कर्म गर्ने प्रयासमा माया र हौसला दिने दर्शक र समर्थक बढ्दै गरेको देखेर केहिले फोकडमा बिरोध गरेको कुरा मैले एक सटमा बुझिसके।त्यति जाबो कुरा बुझ्न नसक्ने अ परिपक्व छैन म।
जस्ले जति बर्ष पत्रकरिता गरेको होस त्यो बहस को बिषय होइन अहिले। जनआस्थाका सम्पादकलाई पत्रकारिता क्षेत्रबाट मुलुकको परिवर्तनमा अभुतपुर्व योगदान दिएबापत ३३ किलो सुनकै तक्मा दिनु पर्ने भए पनि दिनुस I have no problem, तर ईमान्दार पत्रकार को जति खडेरी परे पनि मुद्दा माथी मुद्दा परेको मान्छे प्रेस काउन्सिलमा त्यो पनि अर्कालाई आचारसंहिता सिकाउने ठाउँमा एक मिनेट पनि बस्नु हुन्न्न। मेरो कुरा simpal छ।-satya khabar